Data डाटा डिस्कनेक्ट र खराब मार्केटिंग अनुमानहरू | Martech Zone
हामीले भर्खर हाम्रो साइटको प्रयोगकर्ता अनुभव परीक्षण चलायौं, र नतीजा विभाजित भयो। श्रोताहरूले हाम्रो सामग्री मन पराएका थिए तर हाम्रो विज्ञापनले चर्काएको थियो - विशेष गरी जहाँ यो स्लाइड हुँदै वा पप अप हुँदैछ। जबकि परीक्षणले हाम्रो साइटको लेआउट, नेविगेशनमा सजिलो र हाम्रो सामग्रीको गुणस्तरलाई प्रमाणित गर्‍यो - यसले हाम्रो समग्र दर्शकहरूलाई नाराज गर्ने केहि चीजलाई पनि औंल्यायो।
यो विच्छेदन त्यस्तो चीज हो जुन वस्तुतः हरेक बजारले सन्तुलन राख्नुपर्दछ, र व्यापारको केसले प्राय जसो श्रोताको प्रतिक्रिया वा रायलाई स .्केत गर्दछ। तपाईका श्रोताहरूको कुरा सुन्नु भनेको वास्तवमै त्यहाँका धेरैजसो बजार गुरु सल्लाहकारहरूसँग काउन्टर हो जुन प्रतिक्रिया गर्ने, सुन्ने र श्रोताको सल्लाह अनुसरण गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन्।
यहाँ १० डेटा विच्छेदन र मार्केटिंग अनुमानहरू छन् जुन हामी अक्सर गर्छौं जुन हाम्रो व्यवसायको लागि भयानक हो।
मानी सबै ग्राहकहरु बराबर छन् - मार्केटिंगशेर्पा हालसालै प्रदान गरिएको विश्लेषण किन ग्राहकहरू सामाजिक मिडियामा ब्रान्डहरू अनुसरण गर्छन्। चार्टले स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि उपभोक्ताहरूको विशाल बहुमतले छुट, स्वीपस्टेक्स, कुपनहरू, इत्यादिको लागि सामाजिकमा ब्रान्डहरू पछ्याउँछ। जे होस्, चार्टले प्रत्येक उपभोक्ताको रायको मूल्य देखाउँदैन। शुद्ध छुटले तपाईंको ब्रान्डको अवमूल्यन गर्न सक्छ र तपाईंको कम्पनीलाई गाड्न सक्छ। म शर्त लगाउन तयार छु कि ती उपभोक्ताहरू जसले जीवन शैलीको मिलान देख्दछन् र उनीहरूको परोपकारी कार्यलाई समर्थन गर्दछन् कम्पनीको व्यवसाय स्वास्थ्यको लागि अधिक मूल्यवान दीर्घकालीन हो।
मान्दै सबै आगन्तुकहरू सम्भावनाहरू हुन् - के तपाईंलाई थाहा छ कि बोट ट्राफिकको% 56% भन्दा बढीको लागि खाताहरू विश्लेषण तपाईंको साइटमा ट्र्याफिक ट्र्याक गर्नुभयो? जसरी तपाईं आफ्नो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ विश्लेषण डाटा, कसरी बट्सले प्रवेश र प्रस्थान पृष्ठहरू, बाउन्स दरहरू, साइटमा समय, आदिलाई प्रभाव पार्दै छ? ती तथ्या so्कहरू यति नराम्रो हुनसक्दछन् कि तपाइँ प्रतिक्रियामा तपाइँको साइट परिवर्तन गर्न प्रेरित हुनुहुन्छ ... तर प्रतिक्रिया बट्सलाई हो, सम्भाव्यतालाई होइन! जब हामी हाम्रो साइट समीक्षा गर्दछौं, हामी गुणात्मक भ्रमणहरूमा धेरै ध्यान दिन्छौं - मानिसहरू जुन बहुविध पृष्ठहरू भ्रमण गर्छन् र हाम्रो साइटमा एक मिनेट भन्दा बढी खर्च गर्छन्।
मानीएको ग्राहक प्रतिक्रियाले तपाईंको उत्पादनलाई सुधार गर्दछ - मैले एक विशाल सास प्रदायकको लागि काम गरें जसले आक्रामक विकास तालिका राखेका थिए जसमा हरेक विमोचनमा हजारौं सुधारहरू र दर्जनौं सुविधाहरू समावेश थिए। नतिजा एक फूलाएको प्लेटफर्म हो जुन अत्यधिक जटिल थियो, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो थियो, अन्तहीन विकास द्वन्द्वको कारणले, र हाम्रो ग्राहक प्रतिधारण कम गर्‍यो। नतिजाको रूपमा, बिक्री अधिक आक्रामक भयो, थप सुविधाहरूको प्रतिज्ञा गरिएको थियो, र चक्र सुरु भयो। जबकि कम्पनीले राजस्व बढायो र धेरै ठूलो रकमको लागि खरीद गरिएको थियो, तिनीहरू अझै पनी लाभ कमाएनन र सम्भावना पनि गर्दैनन्। जब तपाइँ एक ग्राहकलाई तपाइँ के सुधार गर्नु पर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ, ग्राहकले तुरून्त गल्ती खोज्छ र उनीहरूको आफ्नै, किस्सा प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ। यसको सट्टामा, तपाइँ तपाइँको उत्पादन मा सुधारहरु प्राथमिकता को लागी तपाइँको ग्राहकहरु को व्यवहार अनुगमन हुनु पर्छ।
रुकावट अवरुद्ध सम्भावनाहरू मान्दै - हामीले माथी र माफी बिना परीक्षण गरेका छौं, हामी प्राय: एक आगन्तुकको ध्यान खिच्नको लागि अन्तर्क्रियात्मक प्रविधि प्रयोग गर्छौं र उनीहरूलाई हाम्रो ग्राहकहरूसँग संलग्न गराउने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न हामी सक्दछौं। तपाईंको आगन्तुकहरूलाई सोध्नुहोस् यदि उनीहरू अवरोधात्मक प्रबर्धनशील विधिहरू जुन तपाईंले तैनात गरिरहनु भएको छ र प्राय: जसो नभई तिनीहरू होईन भन्छन्। तर त्यसो भए प्रमोशनल विधिहरू परिमार्जन गर्नुहोस् र तपाईं उही आगन्तुकहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन उनीहरूले तपाईंलाई मन पराउँदैनन् भनेको ती हुन् जुन तपाईं मार्फत क्लिक गर्दै र आफुमा स .्लग्न छन्।
मान्दै तपाईं आफ्नो ग्राहक बुझ्नुहुन्छ - हाम्रो ग्राहकहरु अक्सर मान्छे उनीहरु किन खरीद गर्दै छन् मा अनुमानहरु बनाउँछ - मूल्य, उपलब्धता, छूट, ग्राहक सेवा, आदि र लगभग सधैं गलत हुन्छन्। जब तपाईं एक ग्राहकलाई तिनीहरूले तपाईं किन किन्नुभयो भनेर सोध्दा, तिनीहरूले तपाईंलाई गलत कारण पनि भन्न सक्छन्। जब तपाईं पहिलो वा अन्तिम टच एट्रिब्युसनमा निर्भर हुनुहुन्छ, तपाईं पनि एक नराम्रो धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ। एट्रिब्युसन डाटाले एक कार्य लिने सम्भावनाको प्रमाण प्रदान गर्न सक्छ, तर किन उनीहरूले वास्तवमा खरीद गरे। व्यक्तित्व अनुसन्धान बुझ्नको लागि महत्वपूर्ण छ कसले तपाईबाट किन्नुभयो र निष्पक्ष तेस्रो पक्षहरूबाट आएका अन्तर्वार्ताहरूले जवाफ दिन सक्दछन् किन तिनीहरूले तपाईंबाट किन्नुभयो। नसोच्नुहोस् कि तपाईलाई थाँहा छ, तपाई नतिजा द्वारा धेरै आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ।
यहाँ तल रेखा, अवश्य पनि, यो सेगमेन्ट गर्न लगभग असम्भव छ मार्केटिंग योग्य लीड्स तपाईंको बाँकीबाट विश्लेषण डाटा तपाईंले मार्केटिंग निर्णयहरू गर्नुपर्दछ कुनमा आकर्षक र केहि संलग्नतामा त्यो खण्डमा, यद्यपि। तपाईंको वेबसाइट सबैलाई खुशी पार्न त्यहाँ छैन; यो एक बिक्री स्रोतको रूपमा देख्नु पर्छ जुन यसका आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ र संलग्न गर्दछ, तिनीहरूलाई रूपान्तरण मार्फत ड्राइभ गर्दै।
मैले मेरो व्यवसायसँग यस्तै गल्तीहरू गरेको छु। मैले सुनेका धेरै मानिसहरु थिए जो कहिल्यै हाम्रो उत्पादनहरू वा सेवाहरू खरीद गर्न जाँदा मलाई मेरो प्रस्तावहरू र खर्चहरू कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर मलाई भन्दछ। यसले लगभग हामीलाई व्यापारबाट बाहिर राख्यो। अब म यी व्यक्तिहरूको कुरा सुन्नँ - म मात्र मेरो टाउको हल्लाउँछु र मैले ग्राहकलाई के गर्ने भनेर म जान्दछु। उनीहरूको लागि के काम गर्दछ जुन तपाईं वा मेरो लागि काम गर्दैन।
सुनेर र हेरेर मार्केटिंग अनुमानहरू बनाउन रोक्नुहोस् सबैलाई त्यो तपाइँको ब्रान्ड लाई छुन्छ। दर्शकहरु लाई महत्वपूर्ण छ कि अनुभव लाई सुधार गर्न शुरू गर्नुहोस् ... दर्शक जुन सम्भवतः तपाईबाट किन्छन्।
टैग: ग्राहक प्रतिक्रियाडाटा विच्छेद गर्दछDiv पपअपहरूअवरूद्ध विज्ञापनमार्केटिंग धारणामार्केटिंग गल्तीहरूमार्केटिंग योग्य लीड्सपपअपपदोन्नतिसंभावना बनाम आगन्तुकहरु